Izy izany no mpanakanto vao misondrotra niavaka sy nosafidian’ny mpijery niampy ireo mpitsara nandritra ny fifaninanana natao tany Lagos-Nigeria ny alahady alina teo. Mpanakanto 9 avy amina firenena 7 aty amin’ny kontinanta Afrikanina dia Afrika atsimo, Angola, Cameroun, Gabon, Nigeria, Madagasikara, Maroc no nandray anjara tamin’ity sokajy iray ity. Niavaka ary nisongadina avy hatrany ny solontenan’i Madagasikara na teo amin’ny fomba fihira na ny gadona sy ny firindran’ny hira, indrindra fa ny seho an-tsehatra. Zanak’i Toamasina i Shyn ary efa maherin’ny 15 taona no nilofosany tamin’ny gadona RnB, Soul. Izy no anisan’ny nanampy sy nanohana an’i Deenyz izay vady andefimandriny tamin’ny zavatra nataony ary efa nisongadina taty Afrika ihany koa.